Nabata na WoopShop.com. Mgbe ị na-eme nchọgharị ma ọ bụ na-azụ ihe site na WoopShop.com, a na-echebe ma kpuchido nzuzo gị na ozi gbasara gị. WoopShop.com na-enye gị ọrụ kachasị mma maka gị dabere na ọkwa, usoro, na ọnọdụ edepụtara na ibe a.
• WoopShop.com na-asọpụrụ nzuzo nke onye ọbịa ọ bụla ma ọ bụ onye ahịa nke weebụsaịtị ma were nchekwa ịntanetị gị nke ọma.
• WoopShop.com na-anakọta ozi ahụ gụnyere Email gị, aha gị, Aha Companylọ Ọrụ, Adreesị Street, Koodu Post, Obodo, Mba, Nọmba Ekwenti, Paswọdu na ihe ndị ọzọ, iji bido, anyị na-eji kuki ndị achọrọ iji kpokọta ma chịkọta ndị na - njirimara nkeonwe banyere ozi banyere ndị ọbịa na saịtị anyị. Ihe omuma a bu ihe omuma banyere gi. Ndị ọrụ nwere ike, gaa na saịtị anyị n’amaghị ama. Anyị ga-anakọta ozi njirimara nkeonwe n'aka ndị ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ha jiri aka ha nyefee anyị ozi dị otú ahụ. Ndị ọrụ nwere ike jụ mgbe niile iji nweta ozi njirimara nkeonwe, belụsọ na ọ nwere ike igbochi ha itinye aka na ụfọdụ ọrụ metụtara saịtị.
• Anyị nwere ike ịnakọta ozi njirimara nkeonwe n'aka ndị ọrụ n'ọtụtụ ụzọ, gụnyere, mana ọnweghị oke, mgbe ndị ọrụ gara na saịtị anyị, debanye aha na saịtị ahụ, nye iwu, zaghachi nyocha, dejupụta otu ụdị, yana na njikọ ya na mmemme ndị ọzọ, ọrụ, atụmatụ ma ọ bụ akụrụngwa anyị mere ka ha dị na saịtị anyị. Enwere ike ịjụ ndị ọrụ, dịka o kwesiri, aha, adreesị ozi-e, adreesị nzipu ozi.
• Anyị na-eji ozi iji nyere anyị aka ime ka ọ dịkwuoro gị mfe iji, ịzaghachi arịrịọ ma ọ bụ mkpesa, nyere anyị aka igosipụta ihe kachasị mkpa nye gị na ichetara gị ozi ọhụrụ, ngwaahịa na ahịa, Kupọns, nkwalite pụrụ iche na ya na
• N'oge ndebanye aha gị, a ga-akpali gị inye anyị aha gị, mbupu na adreesị ịgba ụgwọ, akara ekwentị, na adreesị ozi-e. A na-eji ụdị ozi nkeonwe ndị a maka ebumnuche ịgba ụgwọ, iji mezuo iwu gị. Ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu mgbe ị na-ahazi iwu gị, anyị nwere ike iji ozi nkeonwe ị nyere iji kpọtụrụ gị.
• nwere ike wepu aha site na iji njikọ sitere na akwụkwọ ozi email ọ bụla ma ọ bụ ntọala ndenye aha onwe gị mgbe ịbanye.
• Anyị nwere ike ịnakọta ozi njirimara na-abụghị nke onwe anyị banyere ndị ọrụ mgbe ọ bụla ha na saịtị anyị na-emekọrịta ihe. Ozi njirimara na-abụghị nke onwe gị nwere ike ịgụnye aha ihe nchọgharị ahụ, ụdị kọmputa na ozi teknụzụ gbasara ndị ọrụ 'njikọ nke saịtị anyị, dị ka sistemụ arụmọrụ na ndị na-ahụ maka ịntanetị na-eji ozi ndị ọzọ.
• Saịtị anyị nwere ike iji "kuki" iji welie ahụmịhe Onye ọrụ, anyị nwere ike iji kuki ndị ọzọ site na Trustpilot ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ. Ihe nchọgharị weebụ onye ọrụ na-etinye kuki na draịvụ ike ha maka ebumnuche idebe ihe na mgbe ụfọdụ iji soro ozi gbasara ha. Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ịtọ ihe nchọgharị weebụ ha iji jụ kuki ma ọ bụ iji gwa gị mgbe a na-ezipụ kuki. Ọ bụrụ na ha emee, rịba ama na akụkụ ụfọdụ nke saịtị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
• WoopShop na-anakọta ma jiri ozi nkeonwe ndị ọrụ maka ebumnuche ndị a:
• Anyị na-akwado nnakọta data kwesịrị ekwesị, nchekwa, na usoro nhazi na usoro nchekwa iji kpuchido nnweta na-enwetaghị ikike, mgbanwe, ngosipụta ma ọ bụ mbibi nke ozi nkeonwe gị, aha njirimara, paswọọdụ, ozi azụmahịa na data echekwara na saịtị anyị.
• Anyị anaghị ere, ahia, ma ọ bụ gbazite ndị ọrụ njirimara nke ndị ọrụ na ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi igwe mmadụ anakọtara na-ejikọtaghị na njirimara njirimara ọ bụla gbasara ndị ọbịa na ndị ọrụ yana ndị mmekọ azụmaahịa anyị, ndị mmekọ nwere ntụkwasị obi na ndị mgbasa ozi maka ebumnuche ndị edepụtara n'elu. Anyị nwere ike iji ndị na-enye ọrụ ndị ọzọ nyere anyị aka ịrụ ọrụ anyị na Saịtị ma ọ bụ nye ọrụ na mbibi anyị, dịka izipu akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ nyocha. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gị na ndị ọzọ a maka ebumnuche ndị ahụ pere mpe ma ọ bụrụhaala na ị nyere anyị ikike gị.
• Ndị ọrụ nwere ike ịchọta mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na Saịtị anyị nke jikọtara na saịtị na ọrụ nke ndị mmekọ anyị, ndị na-ebubata ya, ndị mgbasa ozi, ndị na-akwado ya, ndị nyere ikikere na ndị ọzọ. Anyị anaghị achịkwa ọdịnaya ma ọ bụ njikọ dị na saịtị ndị a ma ọ bụghị ha maka omume ndị nrụọrụ weebụ jikọtara ma ọ bụ site na saịtị anyị. Na mgbakwunye, saịtị ma ọ bụ ọrụ ndị a, gụnyere ọdịnaya na njikọ ha, nwere ike na-agbanwe mgbe niile. Saịtị na ọrụ ndị a nwere ike ịnwe amụma nzuzo ha na amụma ọrụ ndị ahịa. Nchọgharị na mmekọrịta na weebụsaịtị ọ bụla ọzọ, gụnyere weebụsaịtị ndị nwere njikọ na saịtị anyị, dị n'okpuru usoro nke usoro weebụsaịtị ahụ.
• paragraf nke Nzuzo a na-akọwa otú e si eji data onwe onye na ọrụ ịkwụ ụgwọ Apple (Apple na-akwụ ụgwọ). Na mgbakwunye, ịkwesịrị ịgụ usoro na ọnọdụ nke Apple Pay. Ihe omume azụmaahịa gị site na WoopShop emetụtaghị Apple Inc.
• WoopShop nwere ezi uche iji melite iwu nzuzo a n'oge ọ bụla. Anyị na-agba ndị ọrụ ume ka ha nyochaa peeji a oge niile maka mgbanwe ọ bụla iji mata banyere otu anyị si enyere iji chebe ozi nkeonwe anyị na-anakọta. Acknow kwenyere ma kwenye na ọ bụ ọrụ gị iji nyochaa iwu nzuzo a kwa oge ma mara maka mgbanwe.
• Site n'iji Saịtị a, ị gosiputara nnabata nke iwu a. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na iwu a, biko egbula saịtị anyị. Gị n'ihu ojiji nke saịtị na-eso ikenye nke mgbanwe a iwu ga-lere gị nnabata nke mgbanwe ndị ahụ.
• Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Iwu Nzuzo a, omume nke saịtị a, ma ọ bụ mmekọrịta gị na saịtị a, biko kpọtụrụ anyị na support@woopshop.com ma ọ bụ info@woopshop.com
• You na-anọchite ma nye ikike na ị dịkarịa ala 18 afọ ma ọ bụ na-eleta Saịtị n'okpuru nlekọta nke ndị mụrụ gị ma ọ bụ onye nlekọta. Ga-abụ naanị maka ịnweta niile na ojiji nke saịtị a site na onye ọ bụla na-eji paswọọdụ na njirimara nke enyere gị na mbụ ma ọ bụ na ịnweghị ikike ịnweta na ojiji nke saịtị a.
• WoopShop.com nwere ike izipu site na ụlọ nkwakọba ihe dị iche iche. Maka iwu nwere ihe karịrị otu ihe, anyị nwere ike kewaa usoro gị n'ọtụtụ nchịkọta dịka ọkwa ngwaahịa si dị n'uche. Daalụ maka nghọta gị.
• Ewezuga ihe ọzọ enyere na ebe a na ibe a ma ọ bụ na saịtị ahụ, ihe ọ bụla ị nyefere ma ọ bụ biputere na WoopShop.com, gụnyere na-enweghị mmachi, echiche, etu esi eme, usoro, ajụjụ, nyocha, echiche, na ntụnye ọnụ, ntinye ga-emeso ya. dị ka ndị na-abụghị ndị nzuzo na ndị na-abụghị ndị ọzọ, na site na ịdebe ma ọ bụ izipu, ị kwenyere na ịghaghị ikikere nbanye na ikike IP niile metụtara ya ewezuga ikike omume dị ka ikike ikike WoopShop.com na enweghị akwụ ụgwọ na WoopShop ga-enwe nnwere onwe eze.
• shall gaghị eji adreesị ozi-e ụgha, mee ka ị bụrụ onye ọzọ karịa onwe gị, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ duhie WoopShop.com ma ọ bụ ndị ọzọ dịka mmalite nke ntinye ma ọ bụ Ọdịnaya ọ bụla. WoopSHop.com nwere ike, mana ọ gaghị akwụ ụgwọ iji wepu ma ọ bụ dezie ntinye ọ bụla gụnyere nkọwa ma ọ bụ nyocha maka ihe ọ bụla.
• Ederede niile, eserese, foto ma ọ bụ onyonyo ndị ọzọ, akara ngosi bọtịnụ, obere vidiyo, akara ngosi, slogans, aha ahia ma ọ bụ sọftụwia okwu na ọdịnaya ndị ọzọ na weebụsaịtị WoopShop.com, ọdịnaya, bụ naanị WoopShop.com ma ọ bụ ọdịnaya ya dabara adaba. ndị na-eweta ngwaahịa. Ikike niile ekwuputaghị n'ụzọ doro anya bụ WoopShop.com. A ga-ekpe ndị dara iwu n'ụzọ zuru oke nke iwu.
• Biko rịba ama na enwere ike ịnweta iwu ụfọdụ anyị na-enweghị ike ịnabata ma ga-akagbu. Ndị otu abụọ kwenyere na, na-esote izipu ozi, njem bụ naanị ọrụ nke ụlọ ọrụ ngwa ngwa nke atọ. N'oge a, nwe ngwaahịa (s) zuru oke nke onye zụrụ ya; ihe niile metụtara ụgwọ na ihe ọghọm n'oge njem ga-ebufe onye zụrụ ya.
• WoopShop.com nwere ike ịnwe njikọ na saịtị ndị ọzọ na ịntanetị nke ndị ọzọ nwere ma jikwaa. Kwenyere na WoopShop.com abụghị ọrụ maka arụmọrụ nke ma ọ bụ ọdịnaya dị na ma ọ bụ site na saịtị ọ bụla dị otú ahụ.
• WoopShop.com nwere ikike ịgbanwe usoro na ọnọdụ a n’ọdịnihu n’enweghị ọkwa.